Sawir ku samee khariidadaha Google - Khariidad
Ku soo sawir galka khariidadaha Google
Mee, 2010 Google Earth / Maps, GPS / Qalabka
Bal qiyaas in aan u baahannahay inaan u dirno khariidada map-ka ee macmiilka si aad u eegto internetka ama gawaarida GPS. Tusaale ahaan, qorshe aan ku iibineyno, wadada si aan halkaa u helno iyo tilmaamaha waddada. Tusaale kale waxay noqon kartaa aag ka mid ah aragtida dayax-gacmeedka MODIS ee maalintaas, kaas oo aan rajeyneyno in lagu dhejin karo barnaamijka khariidadda.
Waxyaabaha ugu fududi waxay noqon karaan inay ku sawiraan Google Earth oo ay u diraan kml saved, laakiin haddii aan rabno inaan isticmaalno xogta asalka ah sida sawirada MODIS, OSM ama Google Maps muuqaal, hubaal maaha mid fudud.
Sidaa darteed, Muuqaalka GPS Waxay leedahay adeeg bilaash ah oo lacag la'aan ah, taas oo kuu ogolaaneysa in aad ka shaqeysid sawirada internetka ee aagga, jidka iyo meesha. Kadibna faylka waxaa lagu keydin karaa kml ama gpx.
Si aad u sawirto aag waa inaad calaamadisaa qodobbada, waxaad u bedeli kartaa jiiditaanka iyo inaad xirto adigoo riixaya meesha ugu horeysa. Xaaladda jidka, guji barta ugu dambeysa, marka ugu dambeysa doorashada ikhtiyaarka ah inay galaan magaca.
In asalka ah, waxaa suurtogal ah in la doorto Khariidadaha Google, qaababka hybrid, image satellite ama terrain. Waxa kale oo aad dhigi kartaa:
Waddamada leh macluumaad dheeraad ah waxaad sidoo kale arki kartaa:
USGS topo, anteenada + G
NRCan ee adeegga Kanada.
Waxa kale oo ku xiga doorashada xulashada asalka ah waxaad dooran kartaa boqollaal hufan oo ah haddii xNUMX% ay muujin doonto khariidada oo kaliya. Waxaa ugu fiican Muuqaalka GPS, taas oo dhamaadka lakabyada, waxaa lagu badbaadin karaa faylka kml si loogu soo bandhigo Google Earth ama GPX si loogu rakibo qalabka GPS navigation.
Xaaladaha qaarkood, xannibaadda pop-upka ayaa laga yaabaa inay farageliso marka la kaydinayo faylasha. Iyadoo ku xiran browserka, waa inaad u ogolaataa daaqadaha soo-baxaya in la muujiyo, tusaale ahaan waxaan isticmaalayaa Google Chrome. Waxa kale oo ay ku haboon tahay in la arko qalab aan wax badan ku xaddidan laakiin mawduucan oo kale Zonum.
Post Previous«Previous Tijaabinta Goobta Wadarta Sokkia SET 630RK
Post Next Safarka Mine EntremaresNext »